ဒီလို အနီးမှုနျတဲ့လူတှကေ ဒီလောကမှာ အမြားကွီးရှိပါတယျ – Shinyoon
လူတိုငျးက ပွီးပွညျ့စုံတယျဆိုလို့ မရှိပါဘူး အားနညျးခကျြကိုယျစီနဲ့ပါ သိသာတာနဲ့ မသိသာတာပဲ ကှာတယျ တခြို့လူတှကေတြော့ မကျြလုံးက အမွငျအားကောငျးပမေယျ့ စိတျနှလုံးကတြော့ အနီးတှေ မှုနျနတေတျတယျ
အနားနားမှာ စတေနာတှေ ထားပွီး ဂရုစိုကျမှုတှေ ပေးပမေယျ့ မမွငျတတျကွဘူး တနျဖိုးထားရကောငျးမှနျလဲ မသိဘူး မရနိုငျတဲ့ အဝေးက အရာတှကေိုပဲ သူတို့က တနျဖိုးတှေ သိနကွေတာ တနျဖိုးထားသငျ့သလောကျလဲ ထားပါတယျ လေးစားသငျ့သလောကျ လေးစားပါတယျ လူလူခငျြးပဲလေ ကိုယျ့ဘကျကတြော့ တနျဖိုးထားဖို့ မပွောနဲ့ ရှိလို့ရှိမှနျးတောငျ မသိတဲ့ အနီးမှုနျတှပေေါ့
သူနဲ့မသိတဲ့ သူစိမျးတှအေပျေါမှာကြ ကောငျးပွလိုကျတာ ကိုယျ့ကိုကြ လူလို့တောငျ သတျမှတျထားတဲ့ပုံတောငျ မပျေါဘူး ကိုယျ့ဘကျကခညျြး ပေးနတော ပွနျပွီး လှညျ့ကွညျ့သငျ့မှနျးသတိမရဘူး ဒီလို အနီးမှုနျတဲ့လူတှကေ ဒီလောကမှာ အမြားကွီးရှိပါတယျ တကယျ့ကို အမြားကွီးပဲ ဒါကွောငျ့ တဈခါတဈရံမှာ ကိုယျ့တနျဖိုးကို နားလညျတတျဖို့ အဝေးဆုံးကို ပွေးထှကျသငျ့လဲ ပွေးထှကျတတျရတယျ
ကိုယျမရှိတဲ့အခါမှ ကိုယျလဈလပျသှားတဲ့နရောတှေ သူ သိလာမှာလေ အဲ့ခြိနျမှ ကိုယျ့တနျဖိုးကို နားလညျသဘောပေါကျလာကွမှာ လှယျလှယျလေးရရငျ လူတှကေ တနျဖိုးမထားတတျကွသလို အမွဲတမျး အလိုကျသတိနဲ့ ပေးပါမြားရငျ တနျဖိုးရှိမှနျးမသိကွဘူး နီးလှနျးပွနျတော့လဲ မမွငျပွနျဘူး
ဒါကွောငျ့ မွငျသာထငျသာ ရှိသှားအောငျ တဈခါလောကျပဲ ဖွဈဖွဈ ဟိုး. . . .အဝေးဆုံးအထိ ထှကျသှားလိုကျပါဘာကိုမှ တှေးမပူနဲ့ ဘာကို စိတျမပူပဲနဲ့ လှတျလှတျလပျလပျသာ သှားပါ ကိုယျ့ကိုလဲ တနျဖိုးထားရကောငျးမှနျးသိဖို့ လိုအပျတယျလေ။
လူတိုင်းက ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ မရှိပါဘူး အားနည်းချက်ကိုယ်စီနဲ့ပါ သိသာတာနဲ့ မသိသာတာပဲ ကွာတယ် တချို့လူတွေကျတော့ မျက်လုံးက အမြင်အားကောင်းပေမယ့် စိတ်နှလုံးကျတော့ အနီးတွေ မှုန်နေတတ်တယ်
အနားနားမှာ စေတနာတွေ ထားပြီး ဂရုစိုက်မှုတွေ ပေးပေမယ့် မမြင်တတ်ကြဘူး တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်လဲ မသိဘူး မရနိုင်တဲ့ အဝေးက အရာတွေကိုပဲ သူတို့က တန်ဖိုးတွေ သိနေကြတာ တန်ဖိုးထားသင့်သလောက်လဲ ထားပါတယ် လေးစားသင့်သလောက် လေးစားပါတယ် လူလူချင်းပဲလေ ကိုယ့်ဘက်ကျတော့ တန်ဖိုးထားဖို့ မပြောနဲ့ ရှိလို့ရှိမှန်းတောင် မသိတဲ့ အနီးမှုန်တွေပေါ့
သူနဲ့မသိတဲ့ သူစိမ်းတွေအပေါ်မှာကျ ကောင်းပြလိုက်တာ ကိုယ့်ကိုကျ လူလို့တောင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံတောင် မပေါ်ဘူး ကိုယ့်ဘက်ကချည်း ပေးနေတာ ပြန်ပြီး လှည့်ကြည့်သင့်မှန်းသတိမရဘူး ဒီလို အနီးမှုန်တဲ့လူတွေက ဒီလောကမှာ အများကြီးရှိပါတယ် တကယ့်ကို အများကြီးပဲ ဒါကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို နားလည်တတ်ဖို့ အဝေးဆုံးကို ပြေးထွက်သင့်လဲ ပြေးထွက်တတ်ရတယ်
ကိုယ်မရှိတဲ့အခါမှ ကိုယ်လစ်လပ်သွားတဲ့နေရာတွေ သူ သိလာမှာလေ အဲ့ချိန်မှ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို နားလည်သဘောပေါက်လာကြမှာ လွယ်လွယ်လေးရရင် လူတွေက တန်ဖိုးမထားတတ်ကြသလို အမြဲတမ်း အလိုက်သတိနဲ့ ပေးပါများရင် တန်ဖိုးရှိမှန်းမသိကြဘူး နီးလွန်းပြန်တော့လဲ မမြင်ပြန်ဘူး
ဒါကြောင့် မြင်သာထင်သာ ရှိသွားအောင် တစ်ခါလောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဟိုး. . . .အဝေးဆုံးအထိ ထွက်သွားလိုက်ပါဘာကိုမှ တွေးမပူနဲ့ ဘာကို စိတ်မပူပဲနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာ သွားပါ ကိုယ့်ကိုလဲ တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်းသိဖို့ လိုအပ်တယ်လေ။